Alahady – 25/01/2015 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Tamin’izany andro izany, rehefa natao an-tranomaizina i Joany, dia nankany Galilea i Jesoa nitory ny Evanjelin’ny Fanjakan’Andriamanitra ka nanao hoe: « Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra; mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely. Nony nandalo teny amoron’ny ranomasin’i Galilea Izy, dia nahita an’i Simôna sy Andre rahalahiny nanarato teo amin’ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Ary hoy i Jesoa taminy: « Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo ». Dia nandao ny haratony niaraka tamin’izay izy, ka nanaraka Azy. Nony nandeha kelikely Izy, dia nahita an’i Jakôba zanak’i Zebede sy i Joany rahalahiny, izay teo an-tsambokely koa nanamboatra ny haratony. Dia niantso azy niaraka tamin’izay Izy, ka nilaozan’izy mirahalahy teo an-tsambokeliny i Zebede rainy sy ny mpikaramany, fa lasa nanaraka an’i Jesoa izy.
Alahady sampan-kazo – 29/03/2015 – Tenin’Andriamanitra